Atsofohy amin'ny Apple TV, ilay haino aman-jery multimedia feno tanteraka. Vaovao IPhone
Ny toerana tranainy indrindra amin'ny toerana azo antoka izay mahatadidy ireo fotoana izay nety ho jailbroken ny Apple TV ary napetraka aTV Flash Black hahafahana mamadika azy ho mpilalao haino aman-jery tena izy. Raha hoy izy ireo taminay fa afaka manao zavatra mitovy isika raha tsy mila Jailbreak, dia azo antoka fa tsy hisy hino izany. Eny, efa zava-misy io, satria io mpamorona io ihany no namorona Infuse, mpilalao haino aman-jery matanjaka ho avy tsy ho ela ho an'ny Apple TV ary efa afaka nanaporofo izahay. Lazainay aminao ny zavatra tsapanay ary asehonay anao ny fomba fiasan'izany amin'ny horonan-tsary.
Efa hitantsika tamin'ny fomba lalina ny fiasan'ny Plex amin'ny Apple TV. Fampiharana mitovy amin'izany ny Infuse saingy mahaleo tena, izany hoe tsy mila mpizara na fampiharana apetraka amin'ny solosaina na NAS vao afaka miditra amin'ny tranombokinao. Amin'ny Infuse dia azonao atao ny mampifandray ireo kapila zaraina amin'ny tamba-jotra ary miditra amin'ny atiny multimedia. Ny fampiharana, avy amin'ny Apple TV anao, dia ho tompon'andraikitra amin'ny fampidinana ny metadata hanomezana anao fanazavana sy fanoharana, hanafatra ny rakitrao rehetra araka ny lohatenin'ilay sarimihetsika na andian-tantara izy io, ary hanakambana ny vanim-potoanan'ny andiany hafa mihitsy aza. ho anao mba hanananao ny tranombokinao araka izay azo atao. azo atao tsara.
Ary aza mino fa manao izany amin'ny interface tsy mitandrina kokoa noho ny Plex, satria hitanao amin'ny sary daholo. Io dia ahafahanao misafidy amin'ireo fiteny audio samihafa ananan'ny rakitra ary na dia ny dikanteny aza. Ianao tsy mbola nanampy dikanteny ho an'ny sarimihetsika? Aza matahotra satria avy amin'ny mpilalao mihitsy dia azonao atao ny misintona azy ireo avy amin'ny OpenSubtitles.org miaraka amina tsindry roa, na dia ilay fiteny tianao hofidina aza.
Na eo aza ny zava-misy fa ny fampiharana dia manao ny playback avy amin'ilay fitaovana mihitsy, tsy misy karazana transcoding toa an'i Plex, tena mihetsika be ny horonan-tsary ary tsy lava ny fotoana idirana. Raha tsy misy ny antsipirihany sasany polishing (mbola amin'ny beta izy io amin'ny fotoana hanaovana an'ity fitsapana ity) ary afaka mizaha ireo rakitra mkv mavesatra, heveriko fa tsy dia atahorana loatra ny milaza izany Infuse dia safidy iray izay mety hihoatra ny Plex amin'ny lafiny sasany, indrindra rehefa milalao rakitra avy amin'ny kapila mafy mifandraika amin'ny tamba-jotra nefa tsy mandeha ny solosaina. Avelako miaraka aminao ilay horonan-tsary hijerena ny fampiharana miasa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple tv » Atsofohy ho an'ny Apple TV, mpilalao multimedia feno indrindra
yanfranklin dia hoy izy:
lahatsoratra tena tsara fotsiny izao dia namorona fikorontanana be ho ahy ianao ary inona ny mahasamihafa ny "plex sy infuse" mety hanampy raha manao fampitahana ianao.
Mamaly an'i yanfranklin
Araka ny fahazoako azy, ny mahasamihafa azy dia mila solosaina mifandray amin'ny tamba-jotra eo an-toerana i Plex izay manana modely na serivisy Plex ahafahanao mijery ny sarinao avy amin'ny fampiharana amin'ny Apple TV anao. Ary ny Infuse dia tsy mila solosaina, ny fampiharana azy dia afaka misambotra ireo lahatahiry zaraina anananao ao amin'ny tambajotran-toerana misy anao, izy no miandraikitra ny fanaovana katalaogy ny atiny. Mieritreritra aho fa raha afaka mampiditra plugins toy ny pelisalacarta eto isika dia hitsahatra tsy hampiasa Kodi (Xbmc) aho ary hivadika hiditra nefa tsy mieritreritra.
Luis, tena hevitra tsara nomenao ahy izany. Tsy nahalala an'i Infuse aho fa izao efa ho faty hanandrana ny kinova farany amin'ny Apple TV.
Ao amin'ilay horonantsary nolazainao fa mila manandramana amin'ny rakitra be ao amin'ny MKV ianao, efa vitanao ve izany? Sarimihetsika MKV maro no manana lalàm-peo marobe, ny sasany amin'ny audio HD (na DTS-HD aza), ary lasa manahirana ny fisie container. Tena liana aho hahafantatra raha nahavita namerina namily vitsivitsy ianao.
Etsy ankilany, ny zavatra tadiaviko indrindra dia ny mpilalao mahay mitendry mozika FLAC ao anatin'ny 96/24 sy 192/24 farafaharatsiny. Ao amin'ny horonantsary dia tsy tononinao raha toa ka mitendry mozika sy ny endrika anaovany azy koa.
Tsy afaka mametraka beta aho fa antenaina fa nisy olona nanandrana an'io ary mandeha tsara.
Nividy ny fangatahana ho an'ny Apple TV 4 aho ary tsy mandeha amiko izany. Isaky ny milalao horonantsary avy amin'ny imac aho dia mahazo hafatra milaza amiko fa tsy azo lalaovina ny audio, fa raha te hanohy ihany aho dia omeko hitohy fa tsy milalao n'inona n'inona. Inona no tsy mety ataoko? Natsipiko 10 euro any amin'ny fako ve?
Mamaly an'i chano